KNOWLEDGE Archives - SANTHITSA
ချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများ… သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ အရပ်အမောင်း၊ ဆံပင်အရောင်ကိုကြည့်ပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာ ချမ်းသာလာနိုင်မလား ခန့်မှန်လို့ ရမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ကို ကြိုသိချင်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာလာမှာလားဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ကြည့်ရင်တော့ ချမ်းသာလာမလားဆိုတာ သိရနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တတ်သူတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးသူတွေနဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားရှိသူတွေဟာ အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြားလက္ခဏာ လေးခုရှိပါတယ်။ သင့်မှာ ဒီလက္ခဏာလေးခုရှိတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ ချမ်းသာလာဖို့ ခိုင်လုံတဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။ လက္ခဏာ (၁) – ငယ်ငယ်ကတည်းက လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ် တစ်နေ့မှာ ချမ်းသာလာနိုင်မယ့် …
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မော်တော်ယာဉ်တွေမှာပါတဲ့ အချက်ပြမီးတွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စာဖတ်သူတို့ မျှေ၀ ပါရစေ….
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မော်တော်ယာဉ်တွေမှာပါတဲ့ အချက်ပြမီးတွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စာဖတ်သူတို့ မျှေ၀ ပါရစေ…. ၁။ ကလပ်နင်းချိန် ပြသော အချက်ပြမီး ၂။ ဘရိတ်နင်းချိန်ပြသော အချက်ပြမီး ၃။ စီယာတိုင် လော့ချအချက်ပြမီး ၄။ မီးကြီးထိုး အချက်ပြမီး ၅။ တာယာ လေပေါင် ဖိအားနည်း အချက်ပြမီး ၆။ ဘေးမီးဖွင့် အချက်ပြမီး ၇။ မီးကြီး၊ တွဲမီး၊ ဆင်ကနယ်မီး သီး ပြသာရှိ အချက်ပြမီး ၈။ ဘရိတ်မီး ပြသာနာရှိ အချက်ပြမီး ၉။ နှင်းတောမောင်းနှင် အချက်ပြမီး ၁၀။ ထူးခြားသတင်းအချက်အလက် အချက်ပြမီး ၁၁။ ဒီဇယ် အပူပေး အချက်ပြမီး …
ကလေးကို အော်မိ ရိုက်မိတာက ကလေးဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မသိတော့ နားလည်မပေးနိုင်လို့ပါ
ကလေးကို အော်မိ ရိုက်မိတာက ကလေးဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မသိတော့ နားလည်မပေးနိုင်လို့ပါ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်တင်ခဲ့ပြီး သော ပို့စ်အဟောင်းလေးပါ ကလေးတွေ ဆိုးတယ်၊ ထိန်း မနိုင်ဘူး တဲ့လား။ မေမေ တို့ရေ.. ကလေး ရှိတဲ့ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ တစ်နှစ်ခွဲ နှစ်နှစ်လောက်က စပြီးတော့ ကလေးတွေ ဂျစ်တိုက်တာ ၊ ဂျီကျတာ၊ ပြောစကား နားမထောင်တာတွေကို ကြံရစမြဲပါ။ အဲဒီ့ အခါမှာ ကလေးနဲ့ မိဘ ကြားမှာ တိုက်ပွဲလေးတွေ စလာရတော့တာပါပဲ။ ကလေးတို့ ဂျစ်တိုက်လာတယ်၊ ဂျီကျလာတယ်။ ပြောလို့ ဆိုလို့ မကောင်းဘူး ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ မိဘ (လူကြီး) ဘက် က …
ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် ရှိမရှိ သိစေနိုင်တဲ့ အချက် ၆ ချက်
ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် ရှိမရှိ သိစေနိုင်တဲ့ အချက် ၆ ချက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ပီသအောင် ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမလဲ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရာမှာ ပညာရှင်တိုင်းက သဘောတူထားတဲ့ ယေဘူယျအချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သူတို့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ပါးသူကို ဝေဖန်ခွင့်ပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတိုင်းဟာ ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထက်တော်တဲ့ လူတွေလည်း ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေမယ်လို့လည်း ခံယူထားကြတဲ့အတွက် တခြားလူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေ နာယူဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ သူတို့ထင်မြင်ချက်တွေကို တင်ပြတိုင်း ”ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်က အဆင်ပြေရဲ့လား၊ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်လေးတွေ ရှိလား။” စသဖြင့် မေးခွန်းပြန်ထုတ်တတ်ကြပါတယ်။ ၂။ သူတို့တွေဟာ ပွင့်လင်းမှုရှိကြတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ …